आशाका आधारशिला : महामारीमा टेकु अस्पतालले दिएको टेको
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको प्राङ्गणमा वर्ष दिनअघि कोभिड संक्रमितहरू मात्रै लामवद्ध हुन्थे । तर, हाल कोरोना संक्रमितहरूको लाइनलाई चटक्कै उछिनेर अस्पताल प्राङ्गणमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लाइन देखिन्छ ।
कोभिड केन्द्रबाट यसरी हेर्दाहेर्दै खोप केन्द्र बनेको टेकु अस्पताल कोरोना कहरमा आम सर्वसाधारणका लागि भरपर्दो टेको बन्न पुग्यो ।
यो कुनै एक दिनको चमत्कार थिएन । हिजोका दिनसम्म बिरामीहरूको नमुना परीक्षण गर्दै आएको टेकु अस्पताल हाल सरकारी अस्पतालका लागि मात्रै नभई समग्र स्वास्थ्य प्रणालीकै लागि नमुना सावित भएको छ ।
व्यक्तिगत जीवन नभनी पेसागत जिम्मेवारीमा बन्दी भई अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा फ्रन्टलाइनरहरूको ऊर्जाले नै आजको यो परिवर्तन सफल भएको हो ।
एक वर्षअघि, जतिखेर स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइनर र अस्पतालकर्मीहरूसँग पीपीई, मास्क र न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा थिएन ! न त स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच नै थियो, कोभिड–१९ बारे पर्याप्त जानकारी । तर, यी सबै अभावका बीच पनि उनीहरू रतिभर डगमगाएनन् ।
त्यसो त, कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हर हमेसा लागिपरेको टेकु अस्पताल स्वयम्‌ले नै कोरोना फैलाउँछ भन्ने भ्रमको पनि सामना गर्नुपर्‍यो । तर, विज्ञानमा विश्वास गर्ने टेकु अस्पताल टिमलाई यस्ता भ्रमयुक्त खबरले कत्ति पनि प्रभावित बनाएन ।
यो एक वर्षमा दसैँ आयो, तिहार आयो । नयाँ वर्ष आयो र गयो । तर, टेकु अस्पतालका फ्रन्टलाइनरहरूका लागि छुट्टी आएन । विश्राम आएन ।
सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै गतिलो उपचार पाइँदैन भन्ने आम बुझाइ र मानसिकता चिर्न शुक्रराज तथा सरुवा रोग अस्पताल सफल भएको छ । यस कोरोनाकालमा निजी अस्पताल छाडेर टेकु अस्पताल धाउने बिरामी आर्जन गर्नु वास्तवमा विश्वास आर्जन गर्नु हो ।
विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने जबजब विश्वमा महामारी, युद्ध र संकट निम्तिन्छ, त्यस्तो बेलामा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै त्यसको जोखियुक्त घेरामा पर्ने गर्छन् । चाहे त्यो इबोला होस्, सार्स या एन्थ्र्याक्स, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक तथा सामाजिक जीवनमा यसले प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन असर पारेका कैयौँ दृष्टान्त छन् ।
कोभिड–१९ पनि त्यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो । कोरोना कहरको यस विषम परिस्थितिमा ज्यानको बाजी राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हाम्रा लागि धन्यवादका पात्र हुन् ।
बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि नै पेसागत जीवनमा बन्दी भएका फ्रन्टलाइनलर दुर्व्यवहारका सिकार भएका, घरबेटीबाट निकाला गरिएका, समाजद्वारा बहिष्कार गरिएका समाचार आइरहे । तर, उच्च मनोबलका साथ खटिएका टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी र प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाको नेतृत्वमा रहेका डाक्टर, नर्स र कर्मचारी अहोरात्र खटिए ।
निर्देशक डा. राजभण्डारीले कोभिड मात्र होइन, अरु कालखण्डमा पनि सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका छन् । तर, कोरोनाको समयमा टेकुको नेतृत्व गर्दाको क्षण उनको जीवनकै महत्त्वपूर्ण बन्यो ।
‘३१ वर्ष देशका १४ वटा अस्पतालमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । दुर्गम गाउँदेखि ठूला अस्पतालसम्म काम गरेँ । तर, कोरोनाकालमा टेकुको नेतृत्व गर्दाको क्षण मेरा लागि जीवनमै सम्झनलायक बन्यो’, उनी भन्छन् ।
आफूभन्दा पनि समग्र टिमका कारण कोरोना नियन्त्रण गर्न अस्पताल सफल भएको बताउँछन् उनी ।
‘आफैँ एक्लै गर्न सम्भव छैन । समग्र टिम नै हो । टेकु अस्पताललाई सरकारले कोभिड फोकस अस्पताल घोषणा गर्‍यो । सरकारसँगको समन्वय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र अन्य संघसंस्थाको सहयोगका कारण काम गर्न सफल भयौँ ।’
सरकारले कोभिड फोकस अस्पताल घोषणा गरेलगत्तै अस्पतालको संरचना परिर्वतन गर्नु ठूलो चुनौती थियो । अस्पतालको संरचना निर्माण गरेर कोभिडका बिरामीको उपचारमा कति पनि कम हुन दिएन टेकु अस्पतालको टिमले ।
‘बिरामीको उपचार गर्न पुरानो संरचनाले नधान्ने भयो । नयाँ संरचना बनाउनुपर्‍यो । अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, बेड तत्काल बनायौँ’, उनी भन्छन्, ‘सुरुका दिन सम्झिँदा आज आकाश-जमिनको फरक छ । अस्पतालमा एक जना संक्रमित हुँदा वरिपरि मान्छे हिँड्न नै डराउने स्थिति थियो ।’
सुरुवाती दिनमा अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीमा पनि डर उत्तिकै थियो । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनु उनका लागि अर्को चुनौती थियो ।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउन गाह्रो थियो । पीपीई लगाउनदेखि मनोपरामर्श दिनुपर्थ्यो । मोटिभेसन गर्न कोरोना बीमा गरायौँ । स्वास्थ्यकर्मीको घरपरिवारको पनि बीमा गर्नुका साथै कोभिड भत्ता दिएर कामलाई अगाडि बढायौँ । अस्पतालमै होस्टल र खानाको व्यवस्था मिलायौँ ।’
अरु अस्पतालले कोभिडका बिरामी नहेरे पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा नेतृत्व लिन टेकु अस्पताल प्रतिवद्ध रहेको निर्देशक राजभण्डारी बताउँछन् ।
‘टेकु एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल हो । यसलाई कोभिड अस्पताल बनाउन चाहन्छौँ । कोभिडका बिरामी अरु अस्पतालले उपचार गरेन भने पनि हामी गर्छौं’, उनले भने, ‘कुनै अस्पताललाई गाह्रो भएको छ भने बिरामी टेकुमा पठाए हुन्छ ।’
डा. राजभणडरीसँगै कोरोना बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोला पनि । एक वर्षअघि २८ पुसमा चीनको वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या भएका ती युवकलाई मौसमी रुघा लागेको अनुमान गरिएकै कारण टेकु अस्पतालमा राखिएको थियो ।
कोभिड निमोनियासँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), इपिडिमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको परामर्शमा उनको स्वाबको नमुना परीक्षण गरियो ।
‘कोरोना पुष्टि हुने डर भए पनि सुरक्षित रहन पीपीई थिएन’, प्राथमिक चरणमा कोभिडबारे कुनै साक्षरता नभएको डा. बाँस्तोला सम्झन्छन् ।
अनि उनी खटिए अस्पतालको व्यवस्थापनमा ।
दुई बेडको मात्रै आईसीयू भएको सरुवा रोग अस्पतालमा हाल २० बेडको आईसीयू छ । सुरुवाती दिनमा एनेस्थेटिक्स नभएको अस्पतालमा हाल चार जना एनेस्थेटिक्स छन् । त्यतिखेर दुई/तीन जना कन्सल्टेन्ट भएकोमा हाल डा. बाँस्तोलाको टिमसँग १३ जना कन्सल्टेन्ट छन् ।
सुरुवाती चरणमा आइसोलेसनका लागि पाँचवटा बेड छुट्याइएकोमा हाल पर्याप्त बेड छन् । यसरी आवश्यकताले नै जुटाइदिएको मानव संशाधन र पूर्वाधार विकासले डा. बाँस्तोलालाई व्यवस्थापनमा बलियो बनाएको छ ।
डा. बाँस्तोला भन्छन्, ‘जिम्मेवारीले हामीलाई दिन प्रतिदिन परिपक्व बनाउँदै लग्यो । अब त तनाव पनि बानी परिसक्यो । काममा यति धेरै डुबिएछ कि तनाव कति लिएँ र कसरी व्यवस्थापन गरेँ भनेर सोच्न पनि भ्याइएनछ ।’
एक वर्षको दौरानमा डा. बाँस्तोलाले तीतामीठा थुप्रै अनुभव सँगालेका छन् । कोभिडका बिरामी निको भएर फर्किंदाका खुसी र कति बुबाआमा गुमाउँदाको दु:खका पलहरूसमेत उनीसँग छन् ।
‘जति नै प्रयास गरे पनि सिकिस्त निमोनिया लिएर आइसकेको अवस्थामा हाम्रा प्रयासहरू खेर पनि जान्छन्,’ डा. बाँस्तोला केही भावुक हुन्छन् ।
इमर्जेन्सी वार्डमा आफैँ ठमठम मज्जाले हिँडेर आउने बिरामीहरूलाई निमोनियाले गालेपछि जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि बचाउन नसक्दाको अनुभव अमिलो भएर पोखिन्छ, डा. बाँस्तोलाको अनुहारमा ।
एक दिनको कुरा हो । ट्रान्सफर्मर पड्किएर बत्ती गयो । आईसीयूमा बिरामी भर्ना गरेको छ । वार्डमा बत्ती छैन । त्यति नै बेला जेनेरेटर चल्न सकेन । आईसीयूमा ३/४ घण्टाको ब्याकअप छ, बिरामी भेन्टिलेटरमा छन् । स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई नेतृत्व गरिरहेका डा. बाँस्तोला रातबिरात अस्पताल आए र रातारात एपीएफ, पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर समाधान गरे ।
नेपालजस्तो देशमा निजी अस्पतालप्रतिको विश्वास यतिसम्म चुलिएको छ कि निम्न मध्यम वर्गीयहरू पनि यसपालि कोरोना उपचारका लागि प्राइभेट अस्पताल धाएका थिए । तर, निजीमा १ घण्टा र एक दिन बसेपछि टेकुमा बेड छ भने मिलाइदिन अनुनयविनय गर्ने थुप्रै मानिस आफूकहाँ आइपुगेको डा. बाँस्तोला बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ती बिरामी निको भएर घर जाँदा हामीलाई दिएको स्याबासी र ठूलो रकम तिर्नुपरेका निजी अस्पताललाई सँगसँगै गाली गर्दै निस्किनुभयो । त्यो रकम केमा हालियो ?’ निजी अस्पतालहरूको कार्यशैलीको समीक्षा हुनुपर्ने डा. बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
कोरोना सकिँदै गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र हरेक स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूमा एकरुपता ल्याउन पहल गरिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । यो एकरुपताको पहल कोरोनाले सिकाएको ठूलो पाठ हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
यो महामारीमा टेकु अस्पतालको टिम देख्दा आज देशले गर्व गर्न सक्छ । यस्तै आशाका आधारशिलाहरू थपिँदै जाँदा त हो नि, कुनै पनि देश बन्ने भनेको ।
‘धन्यवाद, डा.अनुप !’
कोरोना फोकस टेकु
टेकु प्रयोगशालाको लोभलाग्दो मनोबल
टेकु अस्पतालमा खोपले ल्याएको खुसी
टेकु आईसीयूकी नर्स, जसले पुरस्कारकाे खुसी काेभिड बिरामीसँगै साटिन्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७, १८:३८:००